Empini eMiddle East - The World March
Ikhaya » Izaziso » Amanothi e-Press » Empini eMiddle East
UNkkGysV Latin America uzwakalisa ukudumala ngesimo sodlame esesike saqubuka phakathi kwamaPalestine nabantu bakwa-Israel
Umhlaba ongenazo Izimpi Nodlame I-Latin America, umzimba we-New Universalist Humanist, onhloso yawo ukufaka isandla ekuqedeni zonke izinhlobo zempi, izimpi, kanye nokufeza umhlaba ongenabo ubudlova noma ukubandlululwa kwanoma yiluphi uhlobo, uzwakalisa ukujula kwawo ngiphoxekile ngesimo sodlame esesivele phakathi kwabantu basePalestine nabakwa-Israel, esivele sibulale abantu abangaphezu kwamakhulu amabili. Iphinde izwakalise ubumbano lwayo nezisulu ezifayo zale micimbi, labo abalimele, kanye nemindeni yabo bonke, bobabili abasePalestine kanye nabakwa-Israyeli.
Le nhlangano elwela amalungelo abantu igcizelela ukuthi akukho lutho oluthethelela isimo sodlame njengaleso esibhekene naso endaweni nokuthi akukho okubaluleke ngaphezu kwempilo yomuntu namalungelo ayo, kungakhathalekile ubuzwe, ubuhlanga, ubulili, inkolelo yenkolo noma umbono wezepolitiki. .
Phakathi kwabashonile kunabesifazane abaningi nezingane, okwenza isimo esingesihle sezenhlalakahle esenzeka esifundeni sibe sibi kakhulu futhi okuyisona esimgqugquzela ngokujule kakhulu ukuthi enze lesi sitatimende njengesisho lesi sehlakalo esibi okumelwe siphele ngokushesha ukuvimbela ukufa okuningi kwabantu abangenacala.
Izwe elingenazimpi futhi elingenabo ubudlova iLatin America inxusa uMkhandlu Wezokuphepha Wezizwe Ezihlangene ukuthi uthathe izinyathelo ngalolu daba futhi unqande ubugebengu obubhekiswe esintwini obenzekayo futhi ujezise iNkantolo Yamazwe Ngamazwe Yezobugebengu lezi zingxabano ezithinteka kakhulu kubantu abasemphakathini. Akwamukelekile ukuthi umphakathi wamazwe omhlaba ube nesandla kulokhu kubulawa kwabantu bese wehluleka futhi endimeni yawo ukugcina ukuthula nokuphepha kwabantu emhlabeni.
Kubiza nonembeza womuntu wezinhlangano ezilwayo ukuthi kumiswe ukwanda kodlame oluba nemiphumela emibi kubantu basePalestine nabakwa-Israyeli, futhi lokho kungaba kubi kakhulu kunezikhathi ezimbi kakhulu ezake zenzeka ngo-2014.
Ubambelela ekutheni okuwukuphela kwendlela yokuqeda lolu dlame olubhebhethekisa ukuthi u-Israyeli aqede ukuqashwa ngokungemthetho kwePalestine. Lokhu kungumsuka wazo zonke izingxabano, ezithandwa yisimo sokulwa samazwe adlala ngebhizinisi lezikhali, phakathi kokunye, i-US Umphakathi wamazwe omhlaba akumele ube nesandla kulokhu kuhlaselwa. Imayelana nokuvikela amalungelo ayisisekelo esintu ahlaselwe unomphela futhi ahlaselwa unomphela.
Izindawo ezithathwe ngabakwa-Israel njengezindawo ezingekho emthethweni ezaliwa yi-UN kufanele zingenelelwe futhi zilawulwe ukuze kuphele ubutha, ukucwasana ngokobuzwe nazo zonke izinhlobo zobandlululo ezinhlangothini zombili. Futhi ukuqeda ukufuduka ngenkani, ubandlululo ngokobuhlanga nazo zonke izinhlobo zokubonakaliswa kokuphakama kwama-Israyeli kubantu basePalestine, abavame ukubhekwa njengababaleki ezweni labo.
Ngendlela efanayo, igxeka okwenziwa yinhlangano yamaPalestine yamaSulumane yokulwa nabakwa-Israel, ngoba alukho uhlobo lodlame oluhlomile olungevumeleke kunoma yikuphi. Izinhlangano zamazwe omhlaba zamalungelo abantu kufanele ziphoqelele i-Fourth Geneva Convention kanye ne-Universal Declaration of Human Rights. Ngaphezu kwalokho, bobabili abantu kumele bamemezele isivumelwano sobabili, bahlale phansi babonisane ngesixazululo esingenalo udlame kulenkinga, futhi basebenzele ukufeza isivumelwano esinqumayo esiqeda lo mzabalazo wegazi phakathi kwezizwe ezimbili ezingodade.
Izwe elingenazimpi nodlame I-Latin America inxusa zonke izinhlangano zomphakathi emhlabeni wonke ezisebenzela amalungelo abantu, ama-pacifists kanye nezinhlangano ezilwa nempi ukuba benze imbangela efanayo futhi bazikhuze ngamandla lezi zigameko ezidabukisayo ezibukela phansi ilungelo lomuntu lokuphila, ukuphepha komuntu nokuhlala indawo engenabo ubudlova njengoba kushiwo kuMqulu Wezizwe Ezihlangene ukuthi wonke umuntu wathembisa ukuhlonipha.
Okokugcina, icela bonke abantu abanonembeza kulo mhlaba, ababusi, abasephalamende, abafundisi, abaholi bezenkolo bazo zonke izinkolo, osopolitiki bazo zonke izinkolelo, abafundi bawo wonke amazinga, ukuba bazibophezele ekusekeleni le njongo, ukuqeda ngokuqinisekile isishayo sezimpi, okuthi nakule millennium entsha kuqhubeke ukuba yihlazo elikhulu emlandweni wesintu, okulethe ukuhlupheka okungaka esintwini.
Abasayinile: Izwe elingenazimpi eChile, Izwe elingenazimpi e-Argentina, Izwe elingenazimpi ePeru, Izwe elingenazimpi e-Ecuador, Izwe elingenazimpi I-Colombia, Izwe elingenazimpi Panama, Izwe elingenazimpi ICosta Rica, Izwe elingenazimpi ICondoras
Sibonga i-Pressenza International Press Agency ngombhalo oshicilelwe: Empini eMpumalanga Ephakathi.
1 ubeke amazwana "Mayelana nengxabano eMiddle East"
Pingback: Empini eMiddle East - iLalam Legal